Ukuphupha iitapile Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iitapile zezosapho lwe-nightshade kwaye kokona kutya kutyiwa kubaluleke kakhulu ebantwini el mundo emva kwengqolowa. Imvelaphi yeetapile ifumaneka eMzantsi Melika, ngakumbi eBolivia nasePeru, enabemi abalima isityalo seetapile ngaphezulu kweminyaka engama-2.000 XNUMX eyadlulayo. Kwakungekho ngenkulungwane ye-XNUMX xa aboyisi baseSpain bezisa imifuno eYurophu, apho yaqala yathathelwa ingqalelo njengesityalo sokuhomba kwaye emva koko phantse inkulungwane kamva yayisetyenziswa njengokutya.
Iitapile ziyimithombo yamandla ebalulekileyo kuba inezixa ezikhulu zesitashi. Nangona kunjalo, ayinakusetyenziswa kwimeko eluhlaza, ivulwe kuphela ngexesha lokupheka, elenza kube lula ukwetyisa kwaye lisinike amandla ngohlobo lweswekile. Iitapile zikwanazo iivithamini kunye neeminerals ezininzi kwaye ziye zavavanywa nakwinyango yendalo. Ngenxa yomxholo wamanzi aphezulu kunye nenani elikhulu le-potassium, iyakwazi ukucoca umzimba kwaye isuse iimveliso zenkunkuma.
Ishubhu enkulu enganeli nje ukunambitheka, kodwa inokunceda ekuphazamiseni umzimba. Icocekile ngeziqholo ezinje nge nutmeg, umzekelo ngohlobo lweetapile ezicujiweyo, iibhola zenyama okanye iinyosi zaseFransi, iitapile zinencasa njengaye wonke umntu.
Okulandelayo, singathanda ukutyhilela ukuba kuthetha ntoni iitapile kumsitho wephupha:
1 Uphawu lwephupha «iitapile» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iitapile» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iitapile» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iitapile» - ukutolikwa ngokubanzi
Nokuba unokukrokrela, amaphupha ngeetapile ayisiyonto inqabileyo. Ngokombono ngokubanzi wokuchazwa kwamaphupha, iitapile njengomfanekiso wephupha zinako ezintle idityanisiwe.
Ukuba umntu umba iitapile ephupheni, iingxaki kunye nemizamo ayenzayo iba yiyo mpu melelo thweswa isithsaba. Ukuba utyala iitapile, umnqweno wamaphupha uza kuzaliseka kungekudala. Ukufumana isivuno samazambane entsimini kuthembisa ngaphezu kwayo yonke impumelelo kwaye umntu angalukhathalela kakuhle usapho lwakhe.
Ukuba uzibona usitya iitapile kwilizwe lamaphupha, ukutolikwa kwephupha kukucebisa ukuba ube noqoqosho kancinci kwixesha elizayo kwaye Ukubhukisha uqeqesho, njengoko oko kungakhokelela kwiingxaki zemali.
Kwelinye icala, ukuba neetapile ezibolileyo phambi kwakho akuhlali kakuhle. Apha iphupha kufuneka lithathele ingqalelo into yokuba impumelelo kunye nolonwabo onalo ngoku alunakuhlala. Oku akunto intle kakhulu malunga nekamva elikufutshane. Kodwa apha, kwakhona, uphando lwamaphupha lucebisa abo baphuphayo ukuba balikhumbule iphupha ngokweenkcukacha ezininzi kangangoko kwaye babandakanye yonke imicimbi ekuqwalaselweni ngokubanzi.
Kubalulekile ukuba yeyiphi imeko obukuyo ngoku nokuba iingxaki zingabonakaliswa apha. Konke oku kunceda ukutolika ngokuchanekileyo uphawu lwephupha "iitapile".
Uphawu lwephupha «iitapile» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha, iitapile njengophawu lwephupha zihlala zihlala zimela inyani yokuba kukho into ebomini esixabisa kakhulu umgudu nomzamo. zikhona imiqoboakukho lula ukuziqonda. Njengokuvuna iitapile entsimini kunokuba ngumsebenzi onzima kunye nodinisayo.
Iitapile zinokufuzisela oko iingcambu zeemvakalelo lendawo yokuphupha. Kanye njengoko iitapile zikhula kwaye zichuma nzulu emhlabeni, into ethile inokukhula ephupheni elisebumnyameni kwaye mhlawumbi ingekavuthwa ukuba ithathe isigqibo. Iitapile zinokumela into eyondla umphefumlo wethu kwaye uyiqinise.
Uphawu lwephupha «iitapile» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya kubona iitapile njengophawu lwe Ukuchuma y ukukhula. Ukongeza, iitapile sisityalo se-nightshade kwaye kuthiwa inokuphakamisa ukubonakala kwabanye abantu abachanabeke kuyo.